Mari mbiri Dzakanaka Munyika Dzinobatanidza Nhoroondo uye Ramangwana muRunyararo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Mari mbiri Dzakanaka Munyika Dzinobatanidza Nhoroondo uye Ramangwana muRunyararo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Yakanaka Mari yeItaly
Boka reEditorial Project rakabatana nePoligraphic Institute yeZecca dello Stato muRome (iyo Italian State Mint) yakatanga meseji yakanaka kwazvo kuburikidza nehunyanzvi hwekuita mari.
Muna 2017 muBerlin, iyo "Makore makumi manomwe eRunyararo muEurope" yakagadzirwa neItaly State Mint yakapihwa semari yakanaka kwazvo pasi rose.
Kwakanga kuri kucherechedzwa kwehunyanzvi hweItaly hwekusika uye kugona kune yakanakisa kuvezwa kwehunyanzvi uye nekukwana kwekudhinda nekupedzisa.
Progetto Editoriale, saka, inodada kuburitsa yakasarudzika.
Kudhirowa kunobva kune yepakutanga nedhipatimendi remukati rekunyora kwehunyanzvi hweIstituto Poligrafico e Mint dello Stato yakagadzirwa mune yakaverengerwa uye yakasimbiswa edition, kupa humbowo hwakazara uye kuparadzira kune chikuru chiitiko chenhoroondo chisati chamboitika mukati menguva. Old Continent.
Runako, kushamisika, nhoroondo, rugare, unyanzvi, tsika - izvi ndizvo zvinhu zvinopindirana mumusangano wehurukuro paMint Museum muRome yemenduru mbiri dzakakosha zvikuru dzakazvarwa kubva mukubatana pakati peProgetto Editoriale Publishing House neHurumende Mint.
Vatauri vechiitiko ichi vaive Directorial Project Director, Francesco Malvasi; Eng. Matteo Taglienti, Musoro weMint uye zvigadzirwa zvehunyanzvi zvekutengesa kuIntegrated Solutions Development Dhipatimendi rePoligrafico; Ing. Antonio Cascelli, Mutungamiriri weState Mint chirimwa kuburikidza neGino Capponi; uye Franco Salvatori, Mutungamiriri Anoremekedzwa weItaly Geographic Society.
Nzvimbo iyi inzvimbo yakasarudzika uye yakasarudzika, yakavhurika kune veruzhinji pazviitiko zvakakosha zvezviitiko zvakakosha. Iyo Museum yeMint yeRome, yakazvarwa mukutanga kwezana ramakore regumi nepfumbamwe seNumismatic Cabinet yekugadzwa kwemari yepapa uye yakapihwa kuHumambo hweItari muna 1870, ine hupfumi chaihwo: mari, menduru, makoni, zvibhakera, wakisi mhando, uye. makopi emari imwe neimwe ichangobva kubudiswa uye menduru.
Kwete izvozvo zvoga, michina yekare yekugadzira simbi nekugadzirwa kwemari nemenduru, mapantographs ezana ramakore regumi nepfumbamwe, uye midziyo inoshandiswa mumadhipatimendi akasiyana-siyana eItaly Mint yakavakirwa pachikomo cheEsquiline (Rome district) muna 1911 inogona kuonekwa pano.
Kubva pa "mari yakanaka kwazvo pasi rose" kuenda kumenduru yakatsaurirwa Runyararo muEurope, nzira yakagadzirwa muna 2015, apo mari yegumi yemaeuro yakatsaurirwa kudingindira rerunyararo yakazvarwa kubva muhunyanzvi hwekusika hwaMaria Carmela Colaneri, muimbi we. Chikoro cheMenduru yeIPZS (State Mint Polygraphic Institute) panguva yehondo yekupedzisira muEurope. Muna 10, mari iyi yakapihwa seyakanyanya kunaka pasirese, ichikunda pakati pezvikumbiro zvemamwe 2017 mints yenyika, uye muna 40, hukuru hwakasimbiswa zvakare muSt.
Parizvino, iyo 10 euro coin haina kwainowanika, uye kukosha kwayo kwemusika kuri kuramba kuchiwedzera. Muna 2020, gore rinoshamisa redenda, Progetto Editoriale yakafunga nechibvumirano chakabatana neIPZS kusimbisa pakati perunyararo, kuchengetedzeka, uye kugarisana kwevanhu kuburikidza nekududzirwazve kwe "70 makore erunyararo muEurope" mari.
Hunyanzvi hwekunyora hwaSilvia Petrassi hwakabereka menduru itsva ine zvinomiririra zvakafanana uye zviratidzo, nechinangwa chekukurudzira nguva dzekufungisisa uye kuziva mune yakaomesesa yepasirese geopolitical framework ine mibvunzo yakawanda yeramangwana.
Ndeupi munhu wenhoroondo, kana asiri waFrederick II wekuSwabia, anganyatso ratidza hunhu hwerunyararo? Mambo weHumambo Hutsvene hweRoma, Mambo weSicily nenzvimbo zhinji dzekumaodzanyemba kweItari, aive mufanotungamira ane tsika uye anoona kure, wezvematongerwo enyika akangwara uye ane ruzivo, aida zvemabhuku nehunyanzvi, zvekuti akawana zita remadunhurirwa rekuti. Stupor Mundi.
Iro zita rakapihwa kuMenduru iri muchimiro chemari, yakagadzirwa naRemo Carboni uye yakamisikidzwa neItaly Mint, iyo yakaunzwa pamwe chete neRunyararo Menduru.
Muiti wacho akatora kurudziro yake zvakananga kubva kuAugustal, mari yegoridhe yekare yakabudiswa muna 1231 uye yakatsaurirwa kuna Frederick II. Iyo yakashata yairatidzira chimiro chaMambo nenzira yaKesari, yakashongedzwa korona yomuruvara, nepo shure yairatidzira gondo reRoma rakanyorwa kuti FRIDERICVS.
Mukududzirwa patsva kwazvino, chifananidzo chakaratidzwa pane chisimbiso chakatsiviwa nechisimbiso chenhoroondo changamire chakakurumbira, hachina kuzoitwazve nenzira iyi, nepo kumashure kwakadhindwa zvinoyemurika sepakutanga.
Kuratidzwa kwemenduru mbiri idzi, saka, kunomiririra rwendo kuburikidza nenhoroondo yeItari neEurope, yakasimudzirwa neyakakoshera mamiriro akapihwa neMint Museum, nzvimbo inosimbisa tsika yekare yeItaly State Mint, yave nhasi tekinoroji. uye avant-garde modhi ichiri kuchengetedza mweya wayo wehunyanzvi uye wehunyanzvi.
"Nekuda kwezviitiko zvichangoburwa kuMiddle East, Northeast Asia, Africa, uye muAfghanistan, boka redu rakafunga kugadzira menduru yakatsaurirwa kurunyararo uye kune hunhu hunotsigira izvi," akadaro Francesco Malvasi, Director weProgetto Editoriale. “Takazvibatanidza nokusikwa kwemari yokufungidzira, Stupor Mundi, chimwe chinhu chiduku chounyanzvi chine kukosha kukuru kwomukati. Uku kuzvipira kwakakosha kwekugadzira kunomiririra mupiro wedu chaiwo kune izvo zvinogona kuzivikanwa, isu tinovimba, semirayiridzo yeEurope yakasimba, inogamuchirwa, yakabatana, uye inotsigira, nzvimbo yekutarisa uye kuenzanisa kune ese nyika nevanhu vepasi.